Ukudlala e World of Tanks, wonke umuntu ufuna ukugcwalisa umonakalo owengeziwe. Kodwa ngaso sonke isikhathi kuvela. In the game kukhona amathangi ezisha kunzima ukunqoba. Funda kuphi zingene bands Japanese, kubalulekile ngoba yiyona izimoto armored kakhulu wehlelwe. Abenzi lutho "ithungwe" kuphi, odinga ukukwazi ezindaweni ezithile. Kodwa okokuqala, sibheke umlando wabo.
Umlando amathangi Japanese
amathangi Japanese wabonakala ngo-1918. Lawa kwakungamadodana izimoto waqala futhi waletha ngokukhethekile kuleli zwe. Esikhathini 1920 ngasekupheleni, nabaqambi Japanese wanquma ukwenza imiklamo yabo, futhi ngo-1929 ethangini kuqala wadedelwa. Naphezu ezingeni eliphansi uxhaso, imishini ukukhiqizwa wakhula yensimbi. Ekupheleni kuka-iMpi Yezwe II Japan zibalwa lesihlanu emhlabeni ekukhiqizeni amathangi.
armored izimoto okusha asetshenziswe Sino-Japanese, futhi phakathi neMpi Yezwe II. Izinkinga zaqala lapho uxhaso baba ngisho kancane, futhi imoto baba izinga kancane. Ngaphezu kwalokho, inani labo liye lehla kakhulu. Lokhu kwawuthonya kakhulu eminye isinyathelo sezempi. amabutho Tank alikwazanga ngaphezulu amandla ababetelekile ngo impi, kanye nezwe umaluju.
Breath okusha yentuthuko ithangi waqala eJapane kusukela ngo-1954. Kulokhu, abaklami kwadingeka ukudala amaphrojekthi izimoto armored kusuka ekuqaleni.
Uhlobo 4 Heavy
Lena ithangi Japanese esindayo, obabukhona ekuthuthukiseni langempela. In the game World of Tanks kuthatha 9 ezingeni. Ekuphileni, unegama yesibili - Uhlobo 2604. Inhloso enkulu ekulweni - uthango intuthuko kanye ukuzivikela.
Ngaphambi kobana sizwisise, lapho isibhakela bands Japanese kufanele kubhekwe Uhlobo 4 Heavy nezinye "Japanese" ngokuya izici Tactical futhi lobuchwepheshe. Njengoba siye saba sobala, ithangi has a zempi okusezingeni eliphezulu futhi isikhali kuhle. Umsebenzi main - ukuba qhubeka kancane, ukuze ifunde wonke umonakalo isitha.
Ukusongela "Uhlobo 4 Heavy" kuthiwa amathangi ezincane, okungase basingatha umzimba futhi nastrelivat "Japanese", kuyilapho eqinisweni mazingadangali isibhamu ukuthatha umgomo at the isitha encane. Izinzuzo zihlanganisa UVNy ezinhle, inani elikhulu amagobolondo ngaphandle yalimala kanye Ukungena. Futhi, ithangi kungaba okuningi ukubona futhi adlulisele oMfelandawonye.
Kodwa ububi main Yiqiniso, ijubane ukujikeleza umbhoshongo, kuhlangana eside, Dynamics ababuthakathaka, ashona futhi, yebo, ngosayizi. Uma ethangini ukuze azenze zikhanye wezikhali kalula ukudubula kwakhe, ngoba kukhona akunzima.
Lapho isibhakela Uhlobo 4 Heavy?
Lapho umdlalo has intambo Japanese "Uhlobo 4 Heavy", okuyinto ugxile kulokhu kungekho muntu owazi. It kamuva abadlali baqala ukuthola ubuthakathaka babo siqu noma nje icala Golden. Yiqiniso, uma ungenawo izinsiza eziningi kangaka, kungcono bafunde ubuthakathaka ethangini.
Kufanele kuqashelwe ukuthi Uhlobo 4 Heavy - is iguqulwe e yayo ngendlela oi. Uma uhlangana ubhekisa amabombo-ku, masinyane phansi abakhwabanisi. ubuthakathaka Front ikhodi ayitholakali njengoba ukubhuka lapha 260 mm. Kodwa ukuba kancane eduze kakhudlwana, singabona indiza umzimba. Uma lesi silo yensimbi ukubeka idayimane, kakade encwadini yakhe kuye kwanciphisa 200 mm.
Iqiniso elibuhlungu liwukuthi lapha eduze BC, okungase yasha bese uphuma ethangini impi. Yiqiniso, njengoba kushiwo ngaphambili, kungenzeka ukuba aphule goldovymi amagobolondo. Uma ushayela 10 ezingeni, ithuba kulimaze nakakhulu.
Okunye bands Japanese
Ngaphambi nangemva Uhlobo 4 Heavy behlaliswe nezinye amathangi ezinkulu zokulungiselela, lapho abadlali unezinkinga. Ngokulandelayo, sifunda lapho ngezibhakela imichilo Japanese, kodwa kuqala kancane kahle.
Kuhle kokusho ukuthi zingu egatsheni laseJapane iqala eyesithathu ezingeni Uhlobo 91 Heavy. Okulandelayo kuye umostilsya Thayipha 95 Heavy. Lezi amathangi iyafana komunye nomunye, ngakho ukukhuluma ngazo ngokwehlukana kwenza akukho mqondo. Lilonke nje futhi ohluke ngokuphelele kithi eseneminyaka emihlanu Level - oi kokulinganisa. Yiqiniso, manje wonke umuntu uyazi ukuthi hlobo luni umshini futhi kanjani ukulwa naso. Kodwa ngokushesha ngemva ukuvela kwalesi silo esibizwa ngokuthi ukushaqeka.
Lokhu kuhlola kulandelwa eqinile izimoto ezimbili armored: oi - ezingeni lesithupha O-Ni - lwesikhombisa. Lapha ungakwazi ukwengeza futhi enamandla O-Ho. Ngalezi amathangi ziyenzeka ngezinye izikhathi discomfiture. abadlali Abangenalwazi angazi kanjani ukubhekana nazo, futhi ngokuvamile uthole kubo umhlaba izimayini ukuba impilo egcwele.
Izinga lesishiyagalolunye kuya kweleshumi matasa Uhlobo 4 futhi Thayipha 5 Heavy Heavy. Lezi imishini armored kahle, futhi ngokhanyikhanyi, ngeke zikwazi ukuthi zenze. Abakwazi ukulwa amazinga 9-10 kuphela, futhi kwezinye izimo goldovye amagobolondo e wehlelwe. Lapho isibhakela bands Japanese, siyowuqonda ngokwengeziwe.
abadlali abanolwazi njalo bazithola ubuthakathaka amathangi amasha. Lapho isibhakela bands Japanese angabekwa 3-4, manje yibo bonke abantu futhi kulula ukwenza kunoma iyiphi umshini. Kodwa amathangi amadala Ungasavele ukuletha eziningi izinkinga. I okungenani okulimazayo kungase kubhekwe oi kokulinganisa ezingeni lesihlanu. Uma ethangini kwaba ohlangothini ngakwesokudla angles kungaba ukungena ngaphandle nobunzima. Uma odlula ekhanda on wakho, kungcono aim turret e opharetha yomsakazo.
Lapho wanezela emhlabeni oi amathangi, okuyinto zingene bands Japanese, akekho owayazi. Uma ezinye izimoto armored ungase vytselit kunoma iyiphi izindawo ezenzakalelayo, bese kusukela 6 angabekwa egatsheni Japanese of TT kuye kwaba nemibuzo ephakanyiswayo. Uma ubhekene nalesi ikhanda silo ku, umgomo ibha ngaphansi umbhoshongo main, Kunoma yikuphi, ungazama ukudubula ethangini, noma emaceleni engela kwesokudla.
Ngokuyinhloko ithangi ukubhuka scheme, kusukela ezingeni lesihlanu, ngesikhathi imicu cishe enjalo. ophahleni zekhadibhodi kuyinto "Japanese", kancane lapha eqine kakhulu kunangesikhathi ukudla kwayo, hhayi ingxenye engezansi, futhi phakathi. Uma intambo isibe idayimane, udinga ukuba aphulukise ekhoneni eduze elingenhla zempi ipuleti, noma ingxenye proximal lombhoshongo.
Ngo-mbono, heavyweights Japanese esabekayo nedlubulundayo, kodwa umkhuba bamane beat bese ushayela isitha ababevela empini.
Kuthiwani uma "GTA 4" kungaqali? Game amaphutha nezisombululo zabo
Ubani 'Maniac' e "Varfeys"
Isikhathi esihle sokulala ngosuku - izici nezincomo odokotela